Olee otú iji weghachi iPhone ma ọ bụ iPad Site iTunes ndabere
Mgbe nwere na ọbara rosh mgbe gị iPhone ma ọ bụ iPad echefuwo nke aka gị? Ma ọ bụ na mmetụta mgbe ị na-ahụ a window Pop elu na-ekwu na ngwaọrụ gị bụ na mgbake mode ma ọ bụ mgbe ihuenyo aga nwa ma ọ bụ anụnụ anụnụ n'ihi na ọ dịghị mara ihe mere? Mgbe unu nwere ike na-eji dochie a gbajiri ihuenyo, ọ bụ ndị dị oké ọnụ ahịa na-echeta na ị na-achọghị ida. Cheedị adịkwa ndị foto na vidiyo si gị aga na njem, ma ọ bụ na-enwe na-ewu na music n'ọbá akwụkwọ nile ọzọ. O sina dị, ọ bụrụ na i mere gị bit na-arụ ndabere maka gị faịlụ, ị na-adịghị ọtụtụ ihe na-echegbu onwe ha banyere. Ị nwere ike iweghachi gị ẹdude ma ọ bụ ọhụrụ na ngwaọrụ na faịlụ site na gị ọhụrụ ndabere.
Olee otú iji weghachi ka a New Ngwaọrụ na iTunes ndabere
Ị nwere ike ịmata na gị na iPhone ma ọ bụ iPad na-izute otu ihe iseokwu. Ị gbalịrị ibidogharịa ngwaọrụ site na-ejide ala "Home" na "Ike" buttons, ma ngwaọrụ okpu reboot. Na ọzọ mgbalị, ị gbalịrị resetting gị iPhone, ma na-agaghị na-arụ ọrụ dị ka mma. Ọzọ mma nhọrọ bụ ịgbalị iji weghachi ekwentị gị na ya ụlọ ọrụ ntọala. I nwere ike iso ndị dị mfe iji mweghachi, dị ka kọwara n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa
Site na iji eriri USB, jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. Nke a kwesịrị kọmputa na i zọpụta gị ndabere on.
Nzọụkwụ 2: Ẹkedori iTunes
Ozugbo gị na ngwaọrụ na jikọọ na kọmputa, iTunes kwesịrị ẹkedori-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị, nanị pịa na iTunes logo na-amalite ngwa aka. Ego ma ọ bụrụ na e nwere onye na iOS update.
Nzọụkwụ 3: Ebute Mweghachi
Na-amalite na-agbake ngwaọrụ gị, gaa na Njikwa> Devices> Weghachi si ndabere. Ọ bụrụ na kọmputa gị na-agba ọsọ na Windows na i nwere ike ịhụ na "File" menu, pịa "Alt" igodo gị keyboard.
Nzọụkwụ 4: Họrọ ndabere Version
Dabere na ụbọchị na size nke dị ndabere faịlụ, ị nwere ike họrọ ihe ndị kasị mkpa version ị chọrọ iji weghachi ekwentị gị na.
Nzọụkwụ 5: Mezue Mweghachi
Pịa "Weghachi" mezue usoro: ngwaọrụ gị malitegharia onwe ya na mmekọrịta gị na kọmputa. Adịghị akwụsị ufọt ufọt ụzọ.
Olee otú selectively Weghachi iTunes ndabere
Ọzọ oké nhọrọ na i nwere ike na-ahọrọ mgbe ahọpụta a ọma software iji weghachi data gị iTunes ndabere bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake).
Nke a software bụ kacha iPhone data mgbake software dị ka ọ bụ ike Chọpụta na-agbake furu efu faịlụ, ehichapụ ozi, foto, videos na ọtụtụ ndị ọzọ na-akwado faịlụ formats. Ọ bụ a zuru mgbake ngwọta bụghị naanị n'ihi na iPhone, kamakwa iPad na iPod Touch. Pịa Download bọtịnụ n'okpuru ibudata Free Trial version.
Soro nzọụkwụ n'okpuru na-enweta ala nke iji ịrụ data mgbake site na iTunes ndabere na Wondershare Dr. Fone maka iOS omume:
Nzọụkwụ 1: Họrọ Iweghachite ọnọdụ
Firstly, igba egbe Wondershare Dr. Fone maka iOS omume na nke ahụ gasịrị pịa "naputa site na iTunes ndabere File" button. The iTunes ndabere mgbake ọrụ ga-enwe ike ịchọpụta na-depụta niile iTunes ndabere faịlụ. Nkọwa maka onye ọ bụla faịlụ dị ka aha, ụbọchị na Oghere Usoro ọgụgụ ga-egosipụta ya n'ihi na gị akwụkwọ.
Nzọụkwụ 2: Ebute iṅomi Action
Họrọ faịlụ na ị ga-achọ naghachi wee pịa na "Malite iṅomi" button. Na oge nke mmịpụta usoro ga-adabere na ego na size nke faịlụ na ị na-agbake.
Nzọụkwụ 3: Preview na Họrọ Files iji naghachi n'aka iTunes
Ozugbo scanning usoro a agwụ, na faịlụ dị maka mmịpụta ga-edepụtara na egosipụta dị ha edemede. Ịnwere ike ihuchalu faịlụ na Tinye akà rà na ndị ahụ ị chọrọ. Mgbe ahụ, nanị pịa na "Naghachi" button nke nwere ike na ala nke window. Gị ozi, kọntaktị na ndetu bụ recoverable kpọmkwem site na ngwaọrụ gị ọ bụrụ na ngwaọrụ jikọọ n'oge mgbake usoro.
Ọrụ nke Dr. Fone nwere ike ijide n'aka na ha nwere ike na-enwe ndị na-esonụ uru nakwa:
Data Recovery Mere mfe
Na dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ ntụgharị jikọọ, ike iṅomi na-agbake, ọrụ ike naghachi furu efu data si ma ha ngwaọrụ ma ọ bụ site ha iTunes ma ọ bụ iCloud backups. Chọta na retrakti gị na ndetu, Whatsapp akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọbụna gị Safari ibe edokọbara na dị nnọọ ole na ole clicks.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị ọ bụla na-anọgide ná a mgbake mode akaghị,-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nwa na ihuenyo nke ọnwụ, ma ọ bụ nanị bụghị na-arụ ọrụ kwesịrị, a software awade "Rụzie Sistem" atụmatụ na nwere ike inwe ya niile ofu elu na dị nnọọ nkeji ole na ole.
Naghachi gị faịlụ selectively
Nke a data mgbake omume awade ya ọrụ na mgbanwe nke ị na-ahọrọ ọ bụla onye faịlụ na ha chọrọ iji naghachi, kama nke nwere naghachi ihe niile hụrụ na ndabere. Wondershare Dr. Fone maka iOS abịa na a "Preview" ọrụ ebe ọrụ nwere ike ele retrievable data (photos, videos, kọntaktị, akpọ akụkọ ihe mere, ozi wdg) na na bulie ndị na ha chọrọ iji naghachi.
> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi iPhone ma ọ bụ iPad si iTunes ndabere